Wasaaradda Isgaarsiinta oo soo bandhigtay sahan lagu sameynayay baraha internetka ee wasaaradaha – Balcad.com Teyteyleey
Wasaaradda Isgaarsiinta oo soo bandhigtay sahan lagu sameynayay baraha internetka ee wasaaradaha
Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknolojiyada ayaa soo bandhigtay sahan ay ku sameysay baraha internetka (websites) ee wasaaradaha federaalka ah, si loo eego kaalinta ay ka cayaari karaan in dadweynuhu helaan warbixinnada iyo adeegyada dawladda, si loo abuuro dhaqanka isla-xisaabtanka iyo daah-furnaanta.
Ujeeddada sahankan oo la sameeyay horraantii bishan ayaa ah sidii sawir guud looga heli lahaa xaaladda baraha internet-ka wasaaradaha dawladda, taasoo hordhac u ah qorshe ay Wasaaraddu ku dooneyso in lagu horumariyo barahaha hay’adaha dawladda, iyadoo laga caawinayo dhinacyada farsamada iyo diyaarinta xogaha.
Sahankan ayaa lagu eegayay 3 dhinac oo kala ah: 1) In wasaaraddu leedahay cinwaan (domain) leh astaanta qaranka (.gov.so); 2) In cinwaanka uu shaqeynayo oo ay saaran tahay naqshad; iyo 3) Inay ku idil yihiin afafka rasmiga ah ee dalka, sida Soomaaliga, Carabiga iyo Ingiriisiga.
Sahanka ayaa lagu ogaaday wasaaradaha dawladda (oo dhan 26) in 21 ka mid ah (77%) ay leeyihiin cinwaan (domain) wata astaanta qaranka, kuwaasoo ay ku jirto 1 wasaarad oo ku cusub Golaha Wasiirrada.
Dhinaca kale qiimeyn lagu sameeyay in cinwaannnada (domains) ay shaqeynayaan ayaa waxaa soo baxday in ku dhowaad 70% cinwaannadaas ay saaran tahay naqshad, halka 30% soo haray aysan waxba u saarneyn.
Sahanka ayaa sidoo kale lagu eegayay afafka ay warbixinnadooda ku soo bandhigaan baraha. Afka Ingiriiska ayaa ugu badan, iyadoo 60% baraha shaqeeya ay leeyihiin qeyb Ingiriis ah, halka 45% kaliya ay leeyihiin qeyb Soomaali ah. Bogagga ku qoran laba af (Soomaali iyo Ingiriis) waa 35%, taasoo muujineysa in qaarna ay leeyihiin mid Ingiriis ah, qaarna mid Soomaali ah oo kaliya. Ma jiro hal bar oo leh qeyb Carabi ah, iyadoo afka labaad ee rasmiga ah uu yahay afka Carabiga. Waxaa kaloo xusid mudan in xitaa baraha shaqeynaya ay aad ugu yar tahay macluumaadka ay bixinayaan, taasoo muujineysa in Don’t want to spend for your Sumycin more than you should? Buy it for 0.38 USD right now! wasaaraduhu u baahan yihiin in laga caawiyo diyaarinta xogaha lagu soo bandhigayo baraha.
Mudane Eng Cabdi Cashuur Xasan, Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta & Teknolojiyada, oo ka hadlayay soo-bandhigista sahankan ayaa sheegay inay tahay wax aasaasi ah in hay’ad kasta oo dawladeed ay yeelato bar internet. “Waxaan dajinay qorshe aan ugu talogalnay in dhammaan hay’adaha dawladda ay mid walba lahaato bar internet shaqeynaysa oo ay u dhammeystiran tahay xog ku qoran 3 af.” ayuu yiri wasiirka.
“Hawshaas waxaan ku billaabeynaa wasaaraddeena – oo aan lahayn bar internet -, waxaana ku xijineynaa wasaaradaha kale, inagoo rajeyneyna in aan isbeddel muuqda ka sameyn doonno waqti dhow” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay.
Xukuumadda oo wada qorshe lagu mideynayo Mushaarka Ciidanka.
Damaca Raga iyo Go’aanada ay gaaraan. NASASHADA JIMCAHA –Q. 45aad
Suicide bomber kills 6 in central Somalia